Mmepụta na nrụpụta ọkụ ndabere batrị China Mkpa ọkụ mberede Saselux
Ìhè nkwado mberede ahụ na -abịa na 12PCS SMD LED. Ọ nwere oke voltaji nke ukwuu: 120-277V. Mmepụta bụ 2.4W max. Na oge ihe mberede ahụ karịrị nkeji 90 mgbe oke iwe gasịchara. Anyị nwere ike iji ya na ọnọdụ iru mmiri, ọ bụghị mmiri mmiri. Ogologo ndụ ya bụ awa 50000.
*Voltage ntinye: 120-277VAC 60Hz
*Nnukwu na -enwu enwu SMD LED 2x1.2W
*Akụkụ: 260.8 x 105 x 59.2 cm
GW: 6.35 n'arọ
[Dị ọnụ ala & ịdị elu dị elu] A na-eme ọkụ mberede ahụ nke ụlọ thermoplastic na-akpụzi nwere ọkwa injinịa. Ọ naghị adị mfe mmebi mgbe ọnọdụ mberede mere. Ọnụ ahịa anyị na -asọ mpi.
[Batrị Na -adịgide Adịgide] Batrị maka nkwado ndabere na mpaghara ejiri ọkụ mberede a nwere ike gbanye ugboro 500 wee rụọ ọrụ nkeji 45000 opekata mpe. Ndabere batrị nwere ike ịdịru ihe karịrị nkeji 90 mgbe chajịchara.
③ [Ọ dị mfe ịwụnye] ọkụ ọkụ mberede nwere ike ịtọ mgbidi ma ọ bụ n'uko ụlọ. Nzọụkwụ nke ịwụnye dị mfe. Anyị ga -enye gị akwụkwọ ntuziaka. Ị nwere ike ịma ọkwa ọkụ mberede site na bọtịnụ ule na ọkụ ngosi ọkụ. Agụnyere ngwa niile.
④ [Akwụkwọ ikike afọ 5] Ìhè mberede ahụ agafeela UL, CUL. Anyị na-ekwe nkwa akwụkwọ ikike afọ 5 maka akụkụ eletriki na ụlọ, akwụkwọ ikike afọ 2 maka batrị. Ọ bụrụ na ị nwere ajụjụ ọ bụla gbasara ịdị mma, biko nweere onwe gị ịkpọtụrụ anyị.
⑤ [Multi-Angle Lighting] Isi ọkụ ọkụ LED na-agbanwe agbanwe na enweghị ọkụ. Mgbanwe nke ntụzịaka ọkụ na -enye gị ohere igosi ọkụ ahụ n'ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ akụkụ 90. Ọkụ ọkụ ọkụ LED na -arụ ọrụ ozugbo ozugbo ike adịghị.
Nke gara aga: Mgbapụta Mgbapụta Mberede ọkụ ọkụ na -akwụ ụgwọ
Osote: Ikanam kemeghi isi Ọpụpụ Mpụpụ Mberede